कृष्णपक्ष | साहित्य संसार
कृष्णपक्षका सहित्यसंसारका सक्रिय सम्प्रेषक र सम्पादक हुन् । उनको ‘तिर्खा’ कथा सङ्ग्रह प्रकाशित छ ।
ईमेल – hi@krishnathapa.com
यहाँ प्रत्येक पलहरू मूल्यवान थिए । सुन्दर नगरी लिमासोलको शहर, गल्ली र चोकहरू, सामुद्रिक तटहरू यहाँ आउने पर्यटकजस्तै चन्चल र चलायमान थिए । आक्रोटिरी तटको नजिक लारनाका र पाफोस शहरको बीचमा अवस्थित तथा ट्रोडोस पहाडको काखमा रहेको लिमासोल व्यापारिक र पर्यटकीय नगर हो । साइप्रसको […]
नूर एल आइन – तिर्खा
गलिलको सामुद्रिक किनार भएर बग्ने चिसो बताससँग ठोकिएर नूरका कपालहरु छालजस्तै तरंगित भैरहेका थिए । बाक्लो आँखीभौं र परेला भएको सुन्दर आँखाको चित्र ट्याटु खोपिएको थियो उसको बायाँ पाखुरीमा, पृष्ठभूमिमा थियो आगो ओकलिरहेको सूर्य । यसबाट सहजै अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो नूर पुरै हिप्पी स्वभावकी थिई […]
कथा – गफी
मेरो अंगालोमा बाँधिएर ऊ धेरै बेर रोइ । शायद पहिलोपटक हुनुपर्छ, नत्र यो चंचल हँसमुख र गफी केटीका आँखाहरूमा अनायास यस्तरी आँसु भरिएको मैले कहिल्यै देखेको थिइनँ । रबिन स्क्वायरको फराकिलो आँगन होस् या साँझ ढलेपछिको सामुद्रिक किनार हरेक पलको भेटमा उसँग खुसी भएका रमाइला […]
जेरुसेलम, माउन्ट ओलिभ, इजरायल ।बितेका दिनहरु फर्कंदैनन – समयको नियम । तर सम्झनाहरु भने बारम्बार फर्किरहन्छन, हृदयको ढोका ढकढक्याउदै ती फेरि फेरि आइरहन्छन । म सम्झन्छु, जेरुसेलम जैतुनको पहाडैमा अवस्थित रेड क्रिसेन्ट अस्पताल । तिमीले पहिलोपटक यस धर्तीमा पाइला टेक्दा म भित्र जुन खुसिको लहर […]
( धेरै समय भैसकेछ केही नलेखी चुपचाप अलप भएको । केही घटनाहरु अवश्य भए, जस्तो घाम लाग्नु, झरी पर्नु वा आकाशबाट रकेट बर्षनु ….. । बितेका दिनहरु निकै चिसा थिए, एउटा अनुभव – हरेक घाउहरुले र तिनका दागहरुले मानिसको स्वरूपलाई त्यसरी बदल्न खोज्दोरहेछ, जो उ […]
पर्खाल पारिको त्यो देश – इजरायल I
पराजय र मृत्युका कथा नलेख्न आग्रह गर्नेहरुसँग एकदम असहमत छु … । विस्थापित् भएर आफैं सँग परिचय माग्नेहरुको कथा कहिलेदेखि लेखिन थाल्यो थाहा छैन । आफ्नै घरबाट खेदिएर आफ्नै आँगनमा भौतारिन विवश धेरै मानिसहरु छन यहाँ । देश भन्दा पहिले मान्छेले ओत खोज्छ, छानो खोज्छ, […]
समर खेल्न शत्रु छैन, जित्नुपर्ने युद्ध छैन I
इजरायलको तेल अभिभमा नेपाली समुदायका विभिन्न संघ संस्थाको सामुहिक आयोजनामा बुद्ध जयन्ती मनाइयो । सहभागी हुने इच्छा हुदाहुदै पनि विदा मिलाउन सकिन । त्यो घडी धेरै ‘मिस’ गरें, यतिखेर आफ्नै एउटा लेख सम्झिएँ । सन्दर्भ – बुद्ध जयन्तीकै । ब्लगमा यसलाई नयाँ शिर्षक दिएँ – […]
इश्वरको तस्वीर I
अर्को पोडकास्ट लिएर आएको छु । प्रेम र भगवानका बिषयमा जति लेखिए, कोरिए या अभिव्यक्तिका अनेकौं माध्यमहरुबाट प्रस्तुत गरिए, बुझाउने कोसिस गरिए ती केवल सागरबाट एक अन्जुली पानी उबाए सरह मात्र हुन् । मलाइ थाहा छ , फेरी पनि जिद्दी मन, त्यसैको सेरोफेरोमा अल्झेर लेखेको […]
पहिले पहिले ‘इतिहासको ब्याज’ भन्ने वाक्यांश खूब प्रयोग गरिन्थ्यो । मेरा पुराना मित्रहरु ! त्यसको अर्थ कसकसलाइ थाहा छ ? हुन त जजसलाई थाहा छ, उसले मेरो ब्लग पढ्छ भन्ने के ग्यारेन्टी ? अनि जसले यो ब्लग पढ्छ उसलाई ‘त्यो’ इतिहासको बारेमा के थाहा ? […]
आमा र बुबा आमा सँग कुरा गरेर म भावुक भएछु, कतिखेर आँखा रसाए पत्तो पाइन । कम्प्युटरमा आमा हुनुहुन्छ। मेरो झुस्स दारी र केही महिना देखि नकाटेको लामो कपाल देखेर भन्दै हुनुहुन्छ – ‘हन कति अल्छी भाको हँ कान्छा ? आमाले सपनाको फेर समाउदै हिड्न […]
‘तिम्रो धेरै याद आउछ यति धेरै की जति तिमी कल्पनासम्म गर्दैनौ । वा जति म तिमीबाट लुकाउने कोसिस गर्छु त्यसभन्दा पनि धेरै ।’ उसले सधैंझैं ईमेल लेखी – व्यस्त मान्छेलाई डिस्टर्ब गर्न मन लाग्छ, सोध्न मन लाग्छ – मेरा सपनाहरूले किन सधैं मलाई तिम्रैतिर डोर्याईरहन्छ? […]
आज मैले आफ्नै आवाजमा कथावाचन पोडकास्ट गरेको छु, कस्तो लाग्यो सुन्नु होला । (यस कथाका घटना तथा पात्रहरु लेखकको कल्पनामा आधारित छन , कसैसँग मिल्न गएमा त्यो केवल संयोग मात्र हुनेछ।) डिसेम्बरको अन्तिम साता, रियाद शहरमा नयाँ बर्षको रौनक पुरै छाई सकेको थियो तर बाहिरको […]